Myanmar popular celebrity couple, Phyo Gyi and Soe Myat Nandar | Myanmar Celebrity Couple Photos
Myanmar popular celebrity couple, Phyo Gyi and Soe Myat Nandar
They are Myanmar popular celebrity, Phyo Gyi and Soe Myat Nandar. Phyo Gyi is Myanmar famous singer and Soe Myat Nandar is Myanmar famous actress. They got married last three year agos in 2005, but they divorced each other in 2008 after announcing about "their end of marriage" on State Newspaper.
Myanmar famous singer, Phyo Gyi and Soe Myat Nandar, Myanmar famous actress.
စိုးမြတ်နန္ဒာ နှင့် ဖြိုးကြီး တို့ စုံတွဲမြန်မာ နာမည်ကျော် အဆိုတော် ဖြိုးကြီး နှင့် စိုးမြတ်နန္ဒာ တို့ ရဲ့ စုံတွဲ ပုံလေးတွေပါ။ စိုးမြတ်နန္ဒာ က နာမည်ကျော် အဆိုတော် ဖြိုးကြီး နဲ့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ လက်ထပ် ခဲ့ ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲ ဟာ မြန်မာ အနုပညာ ချစ်ပရိတ်သတ်ကို အတော်လေး စွဲဆောင်မှု ရှိစေခဲ့ ပါတယ်။ နာမည်ကျော် မင်းသမီး နှင့် အဆိုတော် တို့ရဲ့ လက်ထပ်ပွဲ အထိမ်းအမှတ် စုံတွဲ တေးသီးချင်းတွေလည်း ထုတ်ခဲ့ ကြပါတယ်။ အခု ၂၀၀၈ မှာတော် မင်းသမီး စိုးမြတ်နန္ဒာ က ဖြိုးကြီး ကို ကွာရှင်းပြတ်ဆဲကြောင်း သတင်းစာ မှာ အတိအလင်းကြေငြာခဲ့တာပါ။ ဖြိုးကြီး ကလည်း မကွာရှင်းနိုင်ပါဘူးဆိုတာကို အပြိုင်အဆိုင် သတင်းစာ မှာ ကြော်ငြာထည့် ပြီး ငြင်းခုန်ခဲ့ကြတာပါ။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း စိုးမြတ်နန္ဒာ ကို အနုပညာ လုပ်ငန်းတွေမှာ သိပ်မတွေ့ ရတော့ပါဘူး။
lilyJanuary 2, 2011 at 7:37 AMwe still can see movies of စိုးမြတ်နန္ဒာ but where is ဖြိုးကြီး not see anymore.i just want to tell စိုးမြတ်နန္ဒာ try to lose weight alittle noor you areagood movie star. you are all perfect just alittle bit fat .we still love you keep trying the best as you can.ReplyDeleteroseJanuary 19, 2011 at 4:38 PMko pyo kyi ft dar dar = peace , i pray for uReplyDeletelovelygirllayApril 25, 2011 at 5:49 AMko phyo gyi,try to forget dar dar.ReplyDeletezarJuly 14, 2011 at 9:56 AMsoe myat thuzar ka sexy tu tel naw dar jaung phyo gyi kwar twar tar pyit melReplyDeleteAdd commentLoad more...